HGH Singapore - Aiza no hividianana hormonina ho an'ny olombelona?
Avy amin'ny HGH Thailand Enga anie 30, 2018
1. Aiza no azoko hividy HGH na hormone mpamatsy hormonina any Singapore
2. Ny marika tsara indrindra amin'ny HGH ao Singapore
2.1 Miantoka ny hatsaran'ny kalitaon'ny hormonenin'olombelona
2.2 Mora ampiasaina ny penita HGH Genotropin
2.3 Easy storage
2.4 Miaraha amin'ny HGH amin'ny fiaramanidina sy ny seranam-piaramanidina
3. Inona no atao hoe HGH (Somatropin)?
3.1 Fampiasana HGH amin'ny fanatanjahantena
3.2 Fitsaboana ny lohalika ary miaraka amin'ny fanampiana ny hormone mitombo
3.3 HGH amin'ny Bodybuilding
3.4 Ahoana ny fiasan'ny hormonina mitombo amin'ny fitomboan'ny taova?
3.5 Ny fitsaboana ny matavy loatra sy ny fahavoazana
3.6 Ny fitsaboana ny olona mihantitra amin'ny ady any Singapore
4. Ny vokatry ny hormone mitombo
5. Dosage an'ny HGH
6. HGH ao Singapour sy ny fomba fandoavam-bola
6.1 Fe-potoana isam-bolana ho an'ny hormonina mitombo ao Singapore
HGH mpamatsy any Singapore
Ny famokarana HGH Thailand dia iray amin'ireo tetikasan'ny hormone tsy manam-paharoa izay manohana ara-dalàna ny mpanjifa mila somatropin manerana izao tontolo izao, anisan'izany ireo marary avy any Singapore. Ny fikarakarana hormone rehetra dia tena ara-dalàna avokoa na any Thailand na Singapore, manana mari-pahaizana sy fahazoan-dàlana.
Ny mpitsabo avy any Singapore dia afaka manontany sy mahazo ny zava-mahadomelina any Bangkok na any amin'ny birao ary amin'ny alàlan'ny fitateram-bava sy ny fialan'ny manam-pahaizana manokana amin'ny adiresinao izay hampiseho anao amin'ny fomba tsara HGH injection, dia azonao atao ihany koa ny mandidy hormone fampiroboroboana an-tserasera mankany Singapore avy any Thailand manakaiky ny varavaran'ny tranonao, ny torohevitra rehetra, ny fanoloran-kevitra sy ny fanomezana dosie ary ny fandoavam-bola azo atao an-tserasera raha tsy miala ao an-trano.
Ny pharmacy dia miantoka ny adidy rehetra amin'ny fanomezan-toky antoka ny hormone fampiroboroboana ao Singapore, ny fahazoana mivezivezy sy ny fanafahana.
Inona no marika tsara indrindra amin'ny HGH ao Singapore?
Araka ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao, anisan'izany ireo marary avy ao Singapour, ny hormone tsara indrindra momba ny fitomboan'ny olombelona dia vokatry ny orinasa Pfizer - Genotropin GoQuick Pen 12mg (36IU) ny kalitaon'ny Belzika nokarakarain'i Belzika izay entina any Thailandy, ary dia ho takatray Nahoana ny Genotropin no tsara kokoa?
Miantoka ny hatsaran'ny kalitaon'ny hormonenin'olombelona
Avy amin'ny mpamokatra Eoropeana mpanamboatra fanafody sy fitaovana fitsaboana - Mendri-pitokisana i Pfizer amin'ny hatsaran'ny kalitaon'ny vokatra hormonina
Ny fampiasana HGH Genotropin pens
Ny fahafaha-mihetsika amin'ny fampiasana ny fitombon'ny hôpônina hôrtôronina sy ny fitaterana dia mendrika fiheverana manokana. Ny fiomanana amin'ny fitsaboana ny hormone mitombo dia mahatratra minitra 2 fotsiny, ireo mpikaroka momba ny genotropin dia nitandrina ny fahatsorana sy ny fahatsapana ny fampifangaroana vaksiny ary ny fihenan'ny hormone vovoka, fanitsiana ny dosage marina amin'ny zava-mahadomelina.
Ny fitaovana amin'ny tanana dia noeritreretina ho an'ny antsipiriany kely ao anatin'io efa misy vahaolana hikirakira sy hormonina mitombo. Afaka mifangaro fotsiny ianao amin'ny alàlan'ny fanodinana ny knob avy amin'ny toerana abc mba hametrahana ny dosage ho ohatra 0.6 na 0.9 ml ny bokotra - tsindrio ary vita izany!
Momba ny fampifangaroana, jereo ity lahatsoratra ity
Ny penitra amin'ny hormone mitombo dia natao amin'ny kapila fiarovana, aorian'ny famerana ny hormonina mitombo ao amin'ny toeram-pitsaboana 8-12, dia esory fotsiny ilay fanjaitra, mametraka ny kapaotiny ary ataovy ao anaty vata fampangatsiahana
Miaraha amin'ny HGH amin'ny fiaramanidina sy ny seranam-piaramanidina
Ny mpanjifa sasany avy any Singapore dia maniry ny hikolokolo hormonina avy any Thailandy mankany Singapour na mandeha, dia ny haka fiaramanidina. Tsy toy ny sandoka sinoa mora sy mampidi-doza ianao, tsy mila mitondra kitapom-batana, ampoules, siny, izay mety hampiahiahy indray ny fomban-drazana na ny filàna fanampiana fanampiny.
Genotropin pen iray izay napetrakao fotsiny amin'ny entana na entana tanana ary adinoy izany, plus
Tsy mihabetsaka ny genotropin ary tsy misy rakotra marefo mitombo ny loza ateraky ny fahasimbana
Inona no atao hoe HGH (Somatropin)?
Ny hormone mitrandraka na somatotropine dia iray amin'ireo hormones miparitaka amin'ny olombelona avy any amin'ny faritra avaratra amin'ny pitipoa. Somatotropin dia manandratra fihetsika anabolika, manatsara ny fampiasana proteinina famokarana sela vaovao, miteraka ny fihenan'ny siramamy manitra, mampitombo ny habetsaky ny tebiteby amin'ny tavy. Manana vokatra manasitrana rehefa ratra sy hoderahin'ny hoditra, fitsaboana aretin'ny taolana.
Ny zava-dehibe ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy, dia miasa ho toy ny mpitsabo matanjaka amin'ny fahanterana, manamora ny fanoratana indray ary ny fanoloana ny cellule taloha na maty miaraka amin'ireo vaovao. Raha ny marina, ny hormone mitombo dia zava-mahadomelina vaovao amin'ny hoavy, izay antony lehibe indrindra amin'ny fandraràna ny fivarotana hormone mitombo.
Maro ny laboratoara sy fikarohana maoderina miasa momba ny fampandrosoana zava-mahadomelina amin'ny hormone mitombo amin'ny olona mendri-kaja, ny zava-mahadomelina ho an'ny fambolena sy ny "loharanon'ny tanora" ho toy ny fanafody fanoherana ny fahanterana.
Fampiasana HGH amin'ny fanatanjahantena
Maro amin'ireo atleta avy any Singapore no mampiasa hormone mitombo amin'ny fahasimbana sy ny fahasimbana mifandraika amin'ny fanatanjahan-tena mampidi-doza toy ny ady totohondry, ady tsy misy fitsipika, basketball, baolina kitra ary fanatanjahan-tena hafa izay matetika ateraky ny atleta, ny kofehy ary ny tendany. HGH afaka manampy anao haingana.
Fitsaboana ny lohalika ary miaraka amin'ny fanampiana ny hormone mitombo
Ireo atleta profesora amin'ny fiafaran'ny fanatanjahan-tena fanatanjahan-tena ara-panatanjahan-tena ao anatin'ny fiantohana, ny lohalika ary ny lamosina. Ny fitsaboana ny glanda amin'ny hormone mitombo dia mampiseho vokatra tena tsara - ohatra, marary izay efa niaina lohalika na miverina
Ny fanaintainana taorian'ny herinandro 2 nanombohana ny tsimok'aretin'ny fitsaboana hormonina dia manomboka manamarika fanatsarana lehibe, aorian'ny volana 1 ny fanaintainana tanteraka ary ny marary dia afaka mitohy mankafy ny fiainana sy ny fialan-tsasatra ary ny lalao lala tsy misy olana
HGH amin'ny Bodybuilding
Angamba ny fampihorohoroana hormonina be mpitia indrindra dia ny fanabeazana fanabeazana, toy ny atleta matihanina sy ny mpandidy ao amin'ny toeram-pitsaboana noho ny fahaverezan'ny lanjany be loatra, ny matavy ary ny fitomboan'ny fihenam-bidy.
Ny hormone mitombo dia manana fiantraikany amin'ny anabolika, saingy tsy mitovy amin'ny steroids hafa, dia azo antoka tanteraka ny fampiasana azy satria manana fitombon'ny hormonina mitovitovy amin'ny tovovavy.
Ny marary dia manonitra ny famokarana voa voajanahary voajanahary, izay miala aorian'ny taona 25 ary mitohy tsy mitsaha-mitombo tsy tapaka mandra-pahatongan'ny taonan'ny fahanterana. Izany angamba no mahatonga ireo tanora eo ambanin 'ny 25 taona vao hahavita vokatra tsara amin'ny fambolena.
Ahoana ny fiasan'ny hormonina mitombo amin'ny fitomboan'ny taova?
Ny hormone mitombo amin'ny fanatanjahan-tena mafana ao amin'ny toeram-pisakafoanana sy ny angovo azo avy amin'ny sakafo mahavelona amin'ny proteinina sy ny amino asidra - matetika dia mampihena ny fananganana sela vaovao, ny muscle fibers, ny fanoloana ny sela taloha miaraka amin'ny vaovao - hormone no biriky manan-danja indrindra amin'ny fanorenana ny nofinao
Ny fitsaboana ny matavy loatra sy ny fahavoazana
Ny zava-misy manan-danja indrindra dia ny fifandraisana amin'ny fiterahana amin'ny olona aorian'ny taona 25 - ny vatana dia manomboka mazoto manangona tahiry matavy eo amin'ny kibony, ny kibo sy ny ratra - dia tsotra ny hormonina mitombo ka mitarika mivantana ny metabolismin'ny vatana, aorian'ny 25 taona Ny fitomboan'ny hormonina mitombo ao amin'ny vatan'ny olona dia mihena indraindray fa tsy ny zokiolona no mampiavaka ny sela ety sy ny vatana
Ny fitsaboana ny olona mihantitra amin'ny ady any Singapore
Indrisy fa ny vatantsika dia manana loharanom-baomiera momba ny famantaranandro ary ny fomba ahafahan'ny fiainana sy tsy velona eto an-tany dia mety miova sy mihantitra. Ny olona iray dia mitombo ela noho ny akanjo sy ranomason'ny tavy, ny hozatra, ny fanavaozana ny sela vaovao hanoloana ireo tranainy ary manomboka mihantitra ny olona ary manasitrana.
Ny hormone fitomboana dia mandrisika ny fanasitranana sy fananganana sela vaovao, tavy sy fitambarana. Aorian'ny volana 1, hitanao ny fanatsarana ny endriky ny volo, hoditra, fantsika. nilamina.
Eny, noho ny tsindrona ny hormone mitombo fa manomboka amin'ny fanadiovana eran'izao tontolo izao ny organism, manolo ny sela taloha miaraka amin'ireo olona vaovao ary ny olona no zava-dehibe indrindra - ny tanora, ny hatsaran-tarehy ary ny fahasalamana
Ny vokatry ny Hormone Human Growth
Ny hormone mitombo dia ahitana asidra amino 191 mitovy amin'ny hormona voajanahary voajanahary novokarin'ny gripa. Ny hormone mitombo dia tsy misy fiantraikany eo amin'ny andaniny, ka azo antoka ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy manana fahasimban'ny hormone
Dosage an'ny HGH
Azo alaina ho sokajy 3 ny fandraisana ny hormone mitombo
- HGH ho an'ny fanorenan-trano
- Ny fitsaboana ny matavy ary ny matavy loatra
- fitsaboana amin'ny fitsaboana
Ny rafitra klasikan'ny hormone fitomboana dia
3 IU isa-maraina eo amin'ny vavony foana na alohan'ny hatory
ho an'ny olona mihoatra ny 30 taona efa hatramin'ny lanjany hatramin'ny 100 kg
na 4 IU ho an'ny olona mihoatra ny 100-120 kg
Raha mila fanazavana bebe kokoa, mifandraisa amin'ny mpanolo-tsika an-tserasera
HGH ao Singapour sy ny fomba fandoavam-bola
Ny fivarotan'ny hormone fampiroboroboana ao Thailand dia manolotra ny marary ambany ho an'ny firenena hafa tahaka an'i Aostralia, Etazonia na Kanada. Ny fandoavanao ny baiko dia azonao antoka tanteraka ny hormonina hitombo ao am-baravaran'ny tranonao. Ho an'ireo mpanjifantsika dia vonona ny hanolotra rafitra fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny famoahana isam-bolana
Fe-potoana isam-bolana ho an'ny hormonina mitombo ao Singapore
Ary hatramin'ny asa izany? Tsy ny mpanjifa rehetra no vonona handoa ny karazana hormone 10-12 hormones indray mandeha, na dia eo aza ny fividianana zavatra betsaka lavitra noho ny packages vitsivitsy isaky ny mandeha.
Vonona ho an'ny mpanjifanay avy any singapore izahay mba hahazoana ny vidin'ny fikarakarana ny hormone fampiroboroboana (volana 6), miaraka amin'ity safidy an-tsoratra ity, ny marary dia afaka mandoa hormonina hormone isam-bolana, azo antoka sy azo antoka ny handray ny hormone mitombo isam-bolana.
Ohatra, mila mpanjifa 2 amin'ny hormone mitombo isam-bolana ny mpanjifa iray - Mamoaka karazana 2 amin'ny vidiny maimaim-poana izy, ary mahazo ny lanjany isam-bolana ary volana vitsivitsy monja izy no mandoa ny hormone 2 manaraka. Ity rafitra ity dia mety ho antsika, ny mpanjifantsika ary mamorona fifandraisana misy fifandraisana misy eo amintsika sy ny marary.